XOG XASAASI AH: Maxey tahay arinta uu Robow abu-mansuur iska diiday Xalay Iyo Farmaajo….. | Xaqiiqonews
XOG XASAASI AH: Maxey tahay arinta uu Robow abu-mansuur iska diiday Xalay Iyo Farmaajo…..
Wadahaladii xalay ee dhaxmaray dowladda iyo Roboow ayaa itooda badan ahaa dalab iyo codsi dowladu ay ka dalbaneysa sheikha in uu sameeyo Muxaadrada culus oo ay ka soo qeyb galaan dadweyne fara badan.
farmaajo ayaa ka codsay Robow in muxadaaradaasi kaga hadlo Khaladaadka alshabaab bale dhankiisa abu-mansuur Robow ayaa iska diiday arintaasi isagoo dalbaday in si shuruud la,aan ah loogu qaado dalka Qadar.
Ilaa hadda ma jiro Go,aan Rasmi ah oo Labada dhinac ay ka wada gaareen arinkaasi marka laga reebo saraakiil dowladda ka tirsan oo marba mid sheikha uu la kulmaayo si ay ugu qanciyaan muxadaradaasi hadii la isku af garto ka dhici doonto fagaaraha Dal Jirka dahsoon.
Hadii Robow Abu-mansuur Uu Aqbalo Muxaadaradaasi waxa ay noqon doontaa Guul cusub oo ay dowladda ka gaartay dagaalkii Fikirka ahaa ee u dhaxeeyey Dowladda iyo islaamiyiinta Jiaad doonyaasha ah sidoo kale hadii ay dhacdo muxaadarada ma jiraan dad sidaasi u badan oo ka soo qeyb gali kara sababo la xariira amaanka goobta oo aan la isku haleyn karin.
Hadiise uu Robow Diido in uu ka hadlo kulan noocaasi ah waxa ay bahdil ku noqon doontaa Dowladda iyadoo laga yaabo in ay burburaan wadahadaladii labada dhinac iyo heshiisyadii la kala saxiixday.